Calder Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Idaho, i-United States | Airbnb
Vacation rentals in Calder
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Calder
SUPERHOSTIndlu eyakhiwe esihlahleni · Izivakashi ezingu- 2 · umbhede ongu-1 · Izindawo zokugeza ezingu-0
“Le ndawo yinto ekhethekile. Ukusuka kudrayivu kuze kufike kusesauna. Konke bekuphelele. Sishintshisane izifungo lapho futhi bekungeke kube okuphelele. Sasiba nesivunguvungu / iqhwa somoya esifushane ngosuku oluthile futhi kwakungathi sisemkhathini weqhwa. Kuyathandeka kakhulu futhi akufani nanoma yikuphi okuhlangenwe nakho engake ngaba nakho. Ukwehla ngomgwaqo omkhulu kwakujabulisa ukusho okuncane. Kwakuneqhwa elisha futhi kwasithatha imizuzu engama-25 ukwehla njengoba sizama ngamandla ethu onke ukungasuki siye eceleni kwe-mtn. Thatha i-4WD! Sizobuyela futhi.”
Amasevisi athandwayo ase- Calder ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Calder
SUPERHOSTI-bungalow yonke4.95 (111)
SUPERHOSTIndlu yonke4.9 (210)
SUPERHOSTIndlu eyakhiwe yamapulangwe yonke4.82 (227)
SUPERHOSTIndlu eyakhiwe yamapulangwe yonke4.83 (18)
SUPERHOSTIndlu yonke4.89 (44)
SUPERHOSTIndlu yonke4.83 (164)
Amafulethi wonke4.85 (33)
SUPERHOSTIkamelo lezivakashi lonke5 (43)